स्वास्थ्य मन्त्री थापाको नौटंकी कहिलेसम्म ? - inaruwaonline.com
स्वास्थ्य मन्त्री थापाको नौटंकी कहिलेसम्म ?
प्रकाशित मिति: बिहिबार, जेठ १८, २०७४ समय: १:०६:२२
चितवन। नेपाली कांग्रेसका युवा तथा चर्चित नेता गगनकुमार थापाले मन्त्री भएकै दिन स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार ल्याउने बताएका थिए । केही समय अघि भरतपुर अस्पतालबाट सस्तो र सुलभ रुपमा उपभोक्ताले औषधी पाउन थालेको भनेर मन्त्री थापाले मिडियामार्फत हल्ला पनि चलाए । तर, सोही अस्पतालले अहिले विरामीलाई निशुल्क दिनुपर्ने सेवामा पनि शुल्क उठाएको प्रमाण फेला परेको छ ।
सरकारले गरिव तथा जेष्ठ नागरिकलाई औषधी उपचारमा छुट दिने निर्णय गरेपनि भरतपुर अस्पतालले नै छुट नदिने गरेको तथ्य बाहिर आएको हो । निशुःक औषधोपचार गर्ने गरि भएको निर्णयलाई अवज्ञा गर्दै विरामीसँग शुल्क उठाएको विल हामीलाई प्राप्त भएको छ । विगत १२ दिन देखि भरतपुर अस्पतालमा उपचार गराईरहेका ८४ वर्षिय रामप्रसाद खरालका आफन्तले आफूहरुसँग अस्पताल प्रशासनले निःशुल्कको बिल काटेर शुल्क उठाइरहेको गुनासो गरेका छन् । विरामीका आफन्त अर्जुन खरालले भने–‘बिलमा निशुल्क लेखिएको छ तर हामीसँग त्यहि बिल काटेर रकम लिइरहेको छ ।’ आप्mनो विरामी जेष्ठ नागरिक भएकोले पाउनु पर्ने छुट कति हो भन्ने समेत जानकारी नदिएको उनले बताए ।
स्वास्थ्यका लागि स्वास्थ पानी मुख्य कुरा हो भन्ने कुरा स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई राम्रोसँग थाहा छ । सरकारी अस्पतालले जनतालाई स्वच्छ पानी दिनु पर्छ भन्ने जान्दा जान्दै पनि प्रशासनले पानीको व्यवस्थापन गर्न तत्काल पहल गरेको छैन । तर पनि अस्पतालमाथि स्वास्थ्य मन्त्रालयले कारबाही गर्न सकेको छैन । यूनाइटेड पोष्ट साप्ताहिकमा खबर छ ।